Izahay koa dia manao fanandramana PCR, nahoana ny valiny foana no ratsy kokoa noho ny hafa?
Fotoana famoahana: 06-03-2021
Izahay koa dia manao fanandramana PCR, nahoana ny valiny foana no ratsy kokoa noho ny hafa? Ao amin'ny laboratoara, jereo ny PCR an'ny olon-kafa, avo ny fahombiazan'ny amplification, tonga lafatra ny electrophoresis strip, ary jereo ny azy manokana, sarotra atao mandritra ny fotoana maharitra, mahatsapa tena tsara ny valiny, ny res ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hisafidianana ireo entana azo ampiasaina amin'ny laboratoara PCR (2)
Fotoana famoahana: 06-01-2021
Ahoana ny fomba hisafidianana ireo fitaovana azo ampiasaina amin'ny laboratoara PCR (2) Ny fielezan'ny valanaretina satro-boninahitra vaovao any amin'ny faritra sasany dia nanjary raharahan'ny rehetra. Ny fahitana ny coronavirus vaovao dia mampiasa ny fomba PCR miisa fluorescent amin'izao fotoana izao, ary ny fotoana fahavitan'ny andrana asidra nukorika ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hisafidianana ireo entana azo ampiasaina amin'ny laboratoara PCR (1)
Fotoana fandefasana: 05-26-2021
Hatramin'ny valanaretina satro-boninahitra vaovao dia nahazo fifantohana bebe kokoa hatrany ny fitsapana asidra niokrika, ary nitombo koa ny fangatahana laboratoara PCR. Androany dia hampahafantariko indrindra ny fomba hisafidianana ireo entana azo ampiasaina amin'ny laboratoara PCR. Voalohany indrindra, mila manazava ny karazana fanandramana PCR ataontsika isika. ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana no hambolena bakteria ao anaty lovia Petri plastika?
Fotoana fandefasana: 05-20-2021
Ahoana no hambolena bakteria ao anaty lovia Petri plastika? 1. Diovina ny lovia petri, fonosina taratasy kraft na gazy ary esory amin'ny autoclave amin'ny 121 ℃ mandritra ny 30 minitra. 2. Mandrosoa ny santionany amin'ny masira ara-dalàna tsy misy fangarony, atsindrohy diloilo 1ml ao anaty lovia petri, ary arotsaho ao anaty ...Hamaky bebe kokoa »
Ny tsy fisian'ny toro-hevitra pipette kely dia miteraka olana goavana amin'ny siansa
Ny tendron'ny pipette manetry tena dia kely, mora vidy ary ilaina amin'ny siansa. Mampiroborobo ny fikarohana momba ny zava-mahadomelina vaovao, ny diagnostika Covid-19 ary ny fitsapana ra rehetra teo amin'ny tantara. Saingy ankehitriny, noho ny fahatapahan'ny herinaratra, ny haintrano ary ny fitakiana mifandraika amin'ny areti-mifindra, dia nisy andiana fanelingelenana tsy ara-potoana ao amin'ny rojom-pamokarana pipette tip ...Hamaky bebe kokoa »
2020-2026 Tsenan'ny fahaiza-manao Pipette sy Pipette eran-tany, fizotran'ny famokarana sy firoboroboan'ny indostria isaky ny faritra, karazany, fampiharana ary toetrandro
Fotoana fandefasana: 05-13-2021
"Tatitra momba ny tsenan'ny Pipette Global Technique Pipette" dia mamakafaka amin'ny fomba feno ny lafiny rehetra amin'ny tsena, ao anatin'izany ny haben'ny tsena, faritra marketing lehibe, mpilalao lehibe, orinasa lehibe, firafitry ny tsena, fizarana, famokarana vola, fangatahana, R&D ary paikady varotra ambony. Ny P ...Hamaky bebe kokoa »
Hisy fahasarotana maharary ve aorian'ny fitsapana swab Covid-19?
Fotoana famoahana: 05-12-2021
Tamin'ny 29 aprily 2021, tao amin'ny toeram-pitsaboana iray ao an-tanànan'i Gaza, nisy tovolahy Palestiniana iray naneho hevitra. Mpiasa iray ara-pahasalamana no nanangona santionany amin'ny famonoana orona ho an'ny fitsapana coronavirus. Ny firongatry ny karazana britanika nifindra kokoa tamin'ny volana lasa dia nampitombo ny toe-javatra, izay nampitombo ny firongatry ny tranga amon ...Hamaky bebe kokoa »
Fomba fampiasana sary mikraoskaopy
Fotoana fandefasana: 03-30-2021
1. Ny fomba smear dia fomba fanaovana sarimihetsika izay manaparitaka tsara ny fitaovana amin'ny slide. Ny fitaovana smear dia manana zavamiaina sela tokana, ahidrano kely, ra, ranon-kolontsaina bakteria, fandaminana malaky biby sy zavamaniry, testis, anther sns. Mariho rehefa maka smear: (1) Tsy maintsy madio ny slide. (2) Sli ...Hamaky bebe kokoa »